ဤ ပါဏာတိပါတာ ကံမှ လွဲရပါလို၏ ။
: at 3/31/2009 08:34:00 AM
Killing Field In China - Contest in speedy cooking
ဪ...ဒီပုံလေးကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသေးတယ်။ လူတွေ၊ လူတွေ ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ့ လျှာတဖျားခဏတာ အရသာခံဖို့ အတွက်နဲ့သတ္တဝါတွေကို အရင်ညှင်းဆဲပြီးသတ်ဖြတ်ရတယ်လို့ နော် ။
ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ ပြောရရင် ငါးပါးသီလကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းကြဖို့ ပါ။ အဲဒီထဲက ဦးဆုံးတပါးဖြစ်တဲ့ ပါဏာတိပါတာ-သူတပါးအသက်သတ်ခြင်း မှရှောင်ကျဉ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပါရမီရှင်တဦးမဟုတ်သေးတော့ တပါတ်တခါမွေးရက်မှာ သက်သတ်လွတ်စားရုံကလွဲလို့အစဉ်အမြဲလည်း အသားမစားဘဲ မနေနိုင်သေးပါ။ သတိလက်လွတ်ဖြစ်တဲ့ အခိုက်အတန့် လေးမှာ ကိုယ့်လာကိုက်တဲ့ ခြင်လေး ။ပိုးကောင်လေးတွေ ကို သတ်မိတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ခုလို သူတပါးအသက်ကို ရက်ရက်စက်စက် အရင်ညှင်းဆဲပြီးမှ သတ်တာမျိုး တွေ့ လိုက်ရတော့ ကြည့် နေရင်းနဲ့ ကြက်သီးတောင်ထမိပါတယ် ။
အရင်က ထိုင်ပေမြို့ ထဲ ဝမ့်ဟွာ ညဈေး မှာ တိုးရစ်တွေအလာများတဲ့ နေရာတခုမှာ အဲဒီလို ဆန်ဆန်မြင်ကွင်းမျိုးလေးတွေ တွေ့ ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ မြွေ နဲ့ လိပ်ကလေးတွေကို အရှင်လတ်လတ် ဗိုက်ခွဲပြီးထွက်လာတဲ့ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ကို အရက်နဲ့ ရောပြီးသောက်ဖို့ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ ။ အားတိုးဆေးဆိုပြီးကြော်ငြာရောင်းနေတဲ့ ဆိုင်တွေ အများကြီးရှိခဲ့ ဘူးပါတယ် ။ အခုဆိုရင်တော့ လူမြင်ကွင်းမှာ ဒီလို လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ မလုပ်ရ ဆိုပြီး အစိုးရက တားဆီးပိတ်ပင်ထားတဲ့ အတွက် ဒီပြကွင်းတွေ မရှိတော့ပါဘုး ။
အခုမြင်ရတာကတော့ တရုပ်ပြည်မကြီးက အချက်အပြုတ်ပြိုင်ပွဲတခုပေါ့ ။ အမြန်အချက်ပြိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်။
ခုဆိုရင် ကိုယ်တို့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးမှာလည်း တရုပ်ယဉ်ကျေးမှုတွေ တစတစနဲ့ မသိမသာ လေး နေရာယူစပြုနေပြီမို့ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးတွေ တနေ့ နေ့ မှာ ဖြစ်ပေါ်မလာစေဖို့ဆုတောင်းယုံကလွဲပြီး ဘာများတတ်နိုင်ကြပါမလဲ နော် ။
ဤ ပါဏာတိပါတာ ကံမှ လွဲရပါလို ၏ အရှင်ဘုရား ။
:kiki : at 3/31/2009 08:34:00 AM
Unknown said... | Tuesday, March 31, 2009 10:14:00 AM
inn .. hote tal .ather soasain sar buakyat pal sar tal . pi taw thu myar ted p ter taw sar tal . hal hal :P . ko tine taw ma ted kine bu :D
Unknown said... | Tuesday, March 31, 2009 10:15:00 AM
inn .. hote tal .ater soakyat pal sar talasain sar yal bu . p taw thu myar ted p ter sar tal . hal hal :P ko tine ted kine yal bu . kyout lot :D
မသက်ဇင် said... | Tuesday, March 31, 2009 10:54:00 AM
ကိုယ်တို့ အမိမြန်မာပြည်ကြီးမှာလည်း တရုပ်ယဉ်ကျေးမှုတွေ တစတစနဲ့ မသိမသာ လေး နေရာယူစပြုနေပြီမို့ 
Sein Lyan said... | Tuesday, March 31, 2009 11:15:00 AM
မြင်ရတွေ့ ရတာ စိတ်ထဲမသက်သာလိုက်တာ..
ရွှေပြည်သူ (ShwePyiThu) said... | Tuesday, March 31, 2009 2:50:00 PM
ဟုတ်တယ် kiki ရေ။ သူများ အသွေးအသားကို ဒီလိုညှင်းပန်းတဲ့နည်းနဲ့ စားရမှ သာမန်ထက်လွန်ကဲတဲ့ စွမ်းအားတွေရမယ်ဆိုရင်တော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တကယ်ကို စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါ... ဘာပဲပြောပြော ပြုသူအသစ် ဖြစ်သူအဟောင်းလို့ပဲ ယူဆထားလိုက်ပါတယ်။
Unknown said... | Tuesday, March 31, 2009 2:58:00 PM
နေပြည်တော်မှာလုပ်ထားတဲ့ ပန်းခြံတွေ အဆောက်အဦး အလံတွေကအစ တရုတ်ပုံစံတွေပေါက်နေပြီ..ဒါတော့ လက်ခံတယ်...အသားငါး သတ်တာကတော့ နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးတိုင်းမှာ ရှိကြပါတယ်..ဗုဒ္ဒဘာသာမှာလည်း အလှုတန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် အမဲသားအတွက် နွားတွေသတ် ၀က်သားအတွက် ၀က်တွေသတ်ရနဲ့ အရင်ဆုံးအကုသိုလ်ယူပြီးမှ ကုသိုလ်လုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ...ဒါပေမယ့် တရုတ်တွေလိုတော့ ဟော့ဟော့ကြီးတော့ မလုပ်ဘူးပေါ့...ကောင်းပါတယ် ဒီလို ပညာပေးလေးတွေအတွက်
လင်းဒီပ said... | Tuesday, March 31, 2009 7:02:00 PM
ဖတ်သွားပါတယ်..သတ္တဝါလေးတွေရဲ့အသက်ကို တန်ဖိုးမထား ဒီလိုပြိုင်နေကြတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
လူတွေလည်း ကြာလေ ကြာလေ မေတ္တာတရားတွေ မဲ့လာကြလေပဲ..။
ဒီအကြောင်းလေးတွေ ရေးမလို့စဉ်းစားနေတုန်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်လိုက်ရတော့ ဝမ်းသာသွားတယ်။
တောင်ပေါ်သား said... | Wednesday, April 01, 2009 2:57:00 PM
အမရေ ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး ကျနော်တို့လဲ တဖြေးဖြေး လူရိုင်းခေတ်ကို ပြန်သွားနေတယ်လေ..
ကြယ်ပြာ said... | Wednesday, April 01, 2009 4:01:00 PM
ကြည့်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာ …. ဒီ ကလစ်လေးကို သူငယ်ချင်းတွေပို့ပေးတုန်းကလဲ မကြည့်ဘူး … မောင်လေးပြောပြထားတာမို့ ရှောင်နေမိတယ် … ဒီနေ့တော့ဘာရယ်မဟုတ်လာလည်ရင်း ကြည့်ဖြစ်လိုက်တယ် … စိတ်မကောင်းလိုက်တာ …
အသားတွေတောင်စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်လာသလိုပဲ ခံစားရတယ် ကိကိရယ် …
ကြယ်ပြာက သက်သက်လွတ်စားနေတာမဟုတ်ပေမယ့် မြင်သား၊ကြားသားတော့ရှောင်တယ် .. ငါးခူတို့ ငါးကျည်းတို့တောင် သိပ်မစားဖြစ်ဘူး … ရှင်ရက်ကြီးကနေ ကိုယ်စားချင်လို့ချက်ခြင်းသတ်ရတာမျိုးတွေဆိုမစားဖြစ်ဘူး …
sskyAw said... | Thursday, April 02, 2009 11:08:00 AM
ဒီ ကလစ်လေးကြည့်ပြီး တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အစားတစ်လုပ်အတွက်နော် ...
ပဋိပက္ခများ (သို့ မဟုတ် ) ကျွန်တယောက်ရဲ့တော်လှန်ေ...
မတွေ့ နိုင်သေးတဲ့ အမှန်တရား....
ဒီလိုလုပ်တာ ကောင်းကြသေးရဲ့ လား...
မာတာမိခင် ကျေးဇူးရှင်သို့ 
ဘာလိုလိုနဲ့ရောက်ရအုံးမယ်ဒီရက်လေး
သစ်ပင်တပင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ...
စာမတတ်တဲ့ ဒုက္ခ ...